| December 6, 2012 | Hits:53
1 | | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့(BGB)က နယ်စပ်မှတဆင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာ ၂၈ ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး ယမန်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်ပို့လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းတို့ကို အစားအစာ၊ ဆေးဝါးများနှင့် အတူ ပြန်ပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း BGB ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး Khalequazzaman က ပြောဆိုသည် ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းဌာန Daily Starတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ဦးကိုကိုကြီး ဥရောပ ခရီးစဉ်ထွက်ခွာ
SSA မြောက်ပိုင်းနှင့် အစိုးရ ပဏာမ သဘောတူညီချက်များ ရရှိ
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် အလွန်နီးစပ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြော
ကိုပါကြီး သေဆုံးမှု ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများအား အရေးယူ ပေးရန် ပြည်မြို့၌ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ဖိုးလုံး December 6, 2012 - 2:34 pm	မသိလို့မေးပါရစေ ဧရာဝတီရေ…။ နိုင်ငံတကာက သနားတယ်လို့ပြောနေကြပြီး လက်တော့မခံချင်ကြတော့ အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားဟင်? ကျုပ်တို့နားလည်တာကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ကနေ မြန်မာပြည်ထဲကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ခိုးဝင်လာပြီး ဒေသခံရခိုင်တွေဆီမှာ နေခွင့်တောင်း၊ ပြီးမှလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားအောင်ကြိုးပမ်း။ အဲ..အင်အားလည်းများလာရော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုဟင်ဂျာ လို့အမည်တပ်။ ဒေသခံရခိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်။ ရခိုင်တွေကပြန်တိုက်ခိုက်တော့ နိုင်ငံတကာကိုငိုပြ။ မူဆလင်တွေကိုနှိပ်ကွပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး အစွန်းရောက်ရော၊အစွန်းမရောက်ရော မူဆလင်တွေရဲ့ဖိအားတွေကိုအသုံးချ။ ရခိုင်ပြည်ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အစ္စလာမ္မစ်ပြည်ထူထောင်ဖို့ တောင်း။ မရတော့မှ ဒုတိယခြေလှမ်းအဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းသားဆိုပြီး ဖြစ်ခွင့်တောင်း။ အဲဒါမှမရသေးရင် တတိယအနိမ့်ဆုံးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားလေးတော့ ဖြစ်ပါရစေဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆင်ကြံကြံ ကြံနေကြတဲ့သူတွေကို ရည်ညွှန်းတာလားဟင်?????